किन आउँछ हाइ? यी हुन् ४ कारण ! जानी राख्नुहोस् ...
एजेन्सी । तपाईं रातभरि निदाउनु भएको छैन भने दिनभरि आलस्य हुन्छ। हाइ, हाइ आइरहन्छ। बेलुका अबेर खाना खानुपर्‍यो भने बच्चाहरु हाई काढ्दै बस्छन्। दिउँसो होस् या बेलुका एकसुरमा टिभी हेर्दै गर्दा हाइ आएर दिक्क लाग्न सक्छ। दिउँसो कार्यालयमा काम गर्दागर्दै हाइ काढेर बाथरुमा मुख धुन जानुपर्दा कति नमजा होला। कहिलेकाहीँ त सबारी साधन चलाउँदा नै हाइ आएर हैरान।
- स्रोत सौजन्य : स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको सहयोगमा